Isicelo seMTN Scholarship | Imibuzo yasimahla kunye neempendulo Khuphela i-2022
Ngaba uyafuna ukufaka isicelo semfundo ye-MTN Foundation simahla okanye ukhuphele isiseko semfundo seMTN esiqinisekisiweyo semibuzo kunye neempendulo? Esi sikhokelo siza kukuhamba ngendlela yokufezekisa nayiphi na.
Isicelo seMTN Foundation sokufunda ngoku siyaqhubeka kwaye izicelo zinokuqaliswa kwaye zigqitywe kwi-intanethi simahla kulandela esi sikhokelo apha.
Yintoni iMTN Scholarship?
Ngaba i-MTN Scholarship iyinyani?
Ngubani onokufaka isicelo seMTN Scholarship?
Iimfuneko ze-MTN Foundation Scholarship Eligibility
Ixabisa malini iMTN Scholarship?
Ndingasifaka njani isicelo seMTN Scholarship?
Indlela yokufaka isicelo kwi-MTN Science & Technology Scholarship
Ungasifaka kanjani isicelo seMTN Scholarship yaBafundi abaMfama
Khuphela iMTN Scholarship imibuzo edlulileyo kunye neempendulo
Ndilufumana njani MTN Scholarship Imibuzo edlulileyo kunye neempendulo?
Isampulu yeMTN Foundation Scholarship Imibuzo edlulileyo
IMTN Scholarship yinkqubo yokufunda yonyaka yabafundi abenza isidanga abafuna ukuvuza abafundi abaqhuba kakuhle kumazwe afana neNigeria namanye amazwe aseAfrika.
Zimbini iindidi zezifundo ezihlanganisiweyo kwizifundo zeMTN ezi;
Inkqubo ye-MTN Science and Technology Scholarship Scheme (MTN STSS)
Inkqubo ye-MTN Scholarship Scheme yaBafundi abaMfama (MTN SSBS)
I-MTN STSS iyafumaneka kubafundi besayensi kunye netekhnoloji kuphela ngelixa i-MTN SSBS ifumaneka kubo bonke abafundi abangaboniyo besidanga sokuqala nokuba bayifundela eyiphi na indawo.
Isifundi seMTN ayisosikrelemnqa, siyinyani. Ngapha koko, kunokubakho abantu abathile abanobuqhetseba phaya abathi bangamagosa esiseko seMTN, kuya kufuneka ulumke kwaye ubaphephe abo bantu.
SUKUNIKELA NGAMNYE IMALI UKUKUNCEDA UKHUSELEKILE KWI-MTN SCHOLARSHIP -Ufundisiso lweMTN lusekwe kumgangatho kwaye alunakuqinisekiswa nangubani na ngaphandle kwamagosa ajongene nenkqubo yokhetho abakhetha amabhaso ngokusekwe kumgangatho wabo.
Inqanaba lama-300 abafundi abafunda izifundo ezinxulumene neNzululwazi neTekhnoloji kunye nabafundi abangaboniyo abafunda kumaziko emfundo ephakamileyo (iiyunivesithi, iPolytechnics kunye neeKholeji zezeMfundo) kulo lonke elaseNigeria banelungelo lokufaka isicelo senkqubo yokufunda ye-MTN Foundation.
Ubuncinci be-CGPA ye-MTN yeSayensi kunye netekhnoloji yokufunda yi-3.5 kwinkqubo yokuhlela eyi-5.0 okanye iyalingana (iklasi yesibini ephezulu) kwaye ubuncinci be-CGPA yemfundo ye-MTN yabafundi abangaboniyo yi-3.0 kwinkqubo yokuhlela eyi-5.0.
Abafakizicelo abavela kwi-polytechnics kufuneka babe ne-GPA ephezulu yeTyala ngexesha lokufaka isicelo.
Abafakizicelo kufuneka babe ngumfundi waseNigeria
Kuya kufuneka ube kwinqanaba le-300 ngexesha lokufaka isicelo
Kufuneka ube ufunda eyunivesithi kawonkewonke, i-polytechnic okanye ikholeji yemfundo eNigeria (abafundi baseyunivesithi yabucala abafanelekanga)
Kuya kufuneka ufundele ikhosi enxulumene nesayensi kunye netekhnoloji okanye ube ngumfundi ongaboniyo
Kufuneka uhlangabeze ubuncinci be-CGPA yesicelo
Isiseko semfundo ye-MTN ixabisa amawaka amabini ama-naira ngonyaka kuwo omabini la manqanaba.
Abafakizicelo abaphumeleleyo abakhula kuvavanyo lwe-MTN lokufunda ngokufanelekileyo banikwa izifundi ezixabisa i-N200,000.00 ngonyaka kude kube kuthweswa isidanga logama nje begcina amabakala afunekayo.
Kule minyaka idlulileyo, sincede abafundi ukuba balinganise uvavanyo lwe-MTN Foundation lokufunda ngokufanelekileyo kunye nemibuzo yethu yexesha elidlulileyo kunye neempendulo zePDF. Kulo nyaka, kokunye ukunceda abafundi abaninzi ukuba baphumelele iMTN isiseko semfundo, silinciphisile ixabiso lale ncwadi ukuze ifikeleleke kwabaninzi.
BONUS: Nje ukuba uthenge imibuzo ye-MTN yokufunda kunye neempendulo kuthi, unelungelo lokufumana eminye imibuzo yakutshanje yeMTN yemibuzo edlulileyo kunye neempendulo oya kuthi ukwazi ukuzikhuphela simahla!
COFA Apha ngoku ukuze uyifumane kwi # 1000 ngaphambi kokuba kuphele ukuphela -Iphelelwa kungekudala!
Cofa apha ukuze undithumele umyalezo kuWhatsapp ukuze uyithenge ngo- # 1500
Ukufaka isicelo senkqubo yokufunda ye-MTN, kuya kufuneka unikezele ngolwazi olulandelayo;
Iinkcukacha zoBuntu ezichanekileyo
Ulwazi oluchanekileyo lwe-UTME
Iinkcukacha zeziko lakho (iYunivesithi, i-polytechnic okanye ikholeji yemfundo)
Iinkcukacha zakho zesikolo samabanga aphakamileyo
AmaBakala akho eWAEC
Elandelayo yeeNkcukacha zeKin
Zonke ezi nkcukacha ziya kufuneka ukugcwalisa isicelo seMTN Scholarship ngempumelelo.
Ukufaka isicelo semfundo ye-MTN yeSayensi kunye neTekhnoloji, qinisekisa ukuba uneenkcukacha endizikhankanyile ngasentla zilungile kunye nawe kuba ngekhe ube nakho ukugcina isicelo semali yokufunda ukuze uphinde uqalise kamva.
Emva kokuba ulufumene olu lwazi;
Ndwendwela iphepha leSiseko seMTN apha https://foundation.mtnonline.com/
Skrolela ezantsi kwaye ucofe i-MTN Science & Technology Scholarship Scheme Form
Gcwalisa ulwazi njengoko kufuneka kwaye uluthumele.
Ukwenza inkqubo ibe lula, unga COFA APHA EMHLABENI KWIPHEPHA LESICELO SESICWANGCISO SENKCUKACHA
Ngaphandle kokubonelelwa kwamabanga e-WAEC, abafundi abangaboniyo beMTN bafuna lonke ulwazi njengolwazi lwe-STSS.
Ukuba unolwazi olufunekayo olulungeleyo, landela amanyathelo angezantsi ukufaka isicelo;
Skrolela ezantsi kwaye ucofe iSikimu soSholarship kwiFom yaBafundi abaMfama
Gcwalisa ulwazi njengoko kufuneka kwaye ungenise.
Ukwenza inkqubo ibe lula, unga COFA APHA EMHLABENI KWIPHEPHA LESICELO SESICWANGCISO SENKCUKACHA.
Imfihlelo yokuphumelela yokufunda kukufumana imibuzo kunye neempendulo ezidlulileyo ngaphambi kovavanyo lokufunda.
Emva kwesicelo esiphumeleleyo semfundo ye-MTN, iqumrhu lokufunda liya kukhetha inani labafakizicelo abafanelekileyo ukuba bahlale kuvavanyo lweMTN.
Abafundi abakhethiweyo baziswa ngovavanyo lwe-scholarship hayi ngaphezulu kweentsuku ezimbini phambi kosuku lovavanyo kwaye ukuba awukalulungeli kakuhle olu vavanyo ngaphambi kweli xesha, usenokuba ubeke emngciphekweni ngeli thuba lakho lokufumana isifundi seMTN kwaye ngokuqinisekileyo awunakulungela isifundi kunyaka olandelayo.
Kungenxa yoko le nto sicebisa ukuba wakube usebenze ngempumelelo kwisifundi, into elandelayo ekufuneka uyenzile kwangoko kukufumana imibuzo yokufunda kunye neempendulo zokukunceda ulungiselele ngokufanelekileyo uvavanyo.
Kungenxa yolu vavanyo lobuchule apho kukhethwa abagqwesileyo bokugqibela benqanaba lokufunda ngeMTN.
Ukufumana isifundi seMTN imibuzo edlulileyo kunye neempendulo kuya kufuneka uyikhuphele ngqo kwiphepha lethu lemveliso ngexabiso lebhonasi le- # 1000 okanye sincokole kuWhatsapp ukuyithenga ngexabiso eliqhelekileyo le- # 1500.
Imibuzo yokufunda ye-MTN ithathwa kwezi ndawo zilandelayo:
Apha ngezantsi kukho iisampulu zemibuzo yokufunda kweMTN;
Iishelufa zethu zeencwadi ekhaya zibonisa uluhlu lweencwadi kwi
izifundo ezibanzi kunye neelwimi ezininzi, zibonisa
i _____ ukuthanda kwamalungu osapho lwethu.
Izingxobo zeplastiki zi ____ luphawu loluntu lwabathengi; bona
zifumaneka naphi na apho uhamba khona.
C. ikuyo yonke indawo
Dr. UStuart ufuna uku ____ ingxoxo yakhe nangaphezulu
idatha yolingo; njengoko injalo ithisisi yakhe ___
A. inkxaso - inzulu
C. cokisa - uyanelisa
D. i-buttress - ayonelanga
E. chaza -succinct
Nanga amanye amathuba okufunda anokukunceda nawe;
Urhulumente wase-Nigerian Federal BEA Scholarship wokuFunda kwelinye ilizwe
Abagqwesileyo beeScholarships ukufundisisa eCanada
Ungasifaka njani isicelo seAgbami Scholarship yaBafundi baseNigeria
Ubungcali obuphezulu be-15 kwi-Nigeria
Ulwabiwo-mali lwasekhaya Ukufundiswa kweNigerian Ngaphantsi kweeSchoolships
Ungasifaka njani isicelo seMTN ScholarshipIsicelo seMTN Scholarship
Post Previous:I-Accounting Majors: Izibonelelo ezili-10 kunye neThemba loMsebenzi
Okulandelayo Post:Ukuhamba kuHlahlo-lwabiwo mali: Bonke aBafundi kufuneka bazi ezi zi-7 zokuHamba iiHacks
Pingback: Ezona zikolo zi-PA zilula ukungena kuzo- Study Abroad Nations
Pingback: Ungena njani kwi-PA School-Fees, Requirements, Schools
Oktobha 14, 2021 kwi-2: 59 pm
Wowu! Oku kuluncedo kakhulu. Ndiyikhuphele ngoku.